Nhau - Ndeipi triblend jira? Nei ichinyanyo kufarirwa?
Nei iyo triblend t shirt iri yakanaka kupisa? Kana mutengi wangu achitsvaga rairo yekusarudza zvinhu zvekuita t shirt yenguva dzose, ndine chokwadi chekuzvikurudzira. Kana iwe ukandibvunza kuti sei, ini ndaikuudza kuti triblend tee ndicho chinhu chakapfava chaungambobata.
Sezvaungangofungidzira kubva pazita rekuti triblend, musanganiswa wehembe wakagadzirwa nemicheka mitatu yakasiyana. Ipo t-shati yenguva dzose iri 100% donje, triblend tees iri 50% polyester 25% cotton 25% Rayon kana 50% polyester 38% cotton 12% Rayon, izvo zvinoita kuti vanyorove. Kinda senge t-shati inodakadza inomhanya padiki diki uye iwedzere kutambanuka kwavari. Yedu triblend t-shirt yakaitawo hunyanzvi hwehunyanzvi uye kuisuka, ngainzwe kugadzikana.
Ko kudhinda pane triblend t shirt?
Izvi zvakasiyana triblend zvinhu zvinokanganisa graphic magadzirirwo akadhindwa pairi? Kwete saizvozvo. Iko kune zvishoma zvishoma zvekusiyana kwemavara pakati pema triblends nehembe dzekotoni, asi misiyano idiki. Kana paine chero chinhu, triblends inoita kuti zvigadzirwa zvionekwe zviri nani zvishoma. Iwe unogona kutarisa iyo foto yatakasarudzira vatengi vedu.
Saka ipapo iwe unayo: iyo yakapfava tee zvinhu zvisati zvamboitika, iyo triblend. Pazasi peye triblend yedu ruvara swatch, aya mavara zvinhu akagadzirira-akagadzirwa, iyo moq inongoda 120pcs / ruvara.
100% donje t shirt
Kana iwe uchida kuita mamwe mavara, isu tinogona kuadha sekuenderana neyako pantone kodhi kodhi. Kune 50% polyester 25% donje 25% Rayon triblend zvinhu, iyo yakagadziriswa ruvara moq ndeye 2000pcs / ruvara. Kana iwe usingade yakawanda kwazvo, isu tinokurudzira kuti usarudze 50% polyester 38% donje 12% Rayon, moq yaizove 500pcs / ruvara. Iyo yakasarudzika color swatch sevhisi inogona kuve yemahara.
Unoda kutanga bhizinesi kutengesa triblend t-shirts? Edza kunze kutirovera runhare rwemahara rimwe rekunongedzera mhando!